Wararkii u dambeeyey Shilkii xalay ka dhacay duleedka Hargeysa | Warbaahinta Ayaamaha
Wararkii u dambeeyey Shilkii xalay ka dhacay duleedka Hargeysa
HARGAYSA-AYAAMAHA-Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Shil gaari oo xalay ka dhacay duleedka galbeed ee Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland.
Shilkaan aya gaystay geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah.
Shilkaan ayaa waxaa uu ka dambeeyay, kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca Soomaalida u taqaano Dhayno iyo gaari kale oo Nooha ahaa oo ay saarnaayeen dad shacab ah, xili laba gaadiid ay isaga hor yimideen Koontaroolka galbeed ee Hargeysa.
Inta la xaqiijiyay 5 qof ruux oo kala ahaa saddex dumar ah, Canugar yar iyo darawalkii waday gaariga Noohada ayaa ku geeriyooday Shilka, halka 8 qof kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo si dhaqsi ah loo geeyay Isbitaalka Magaalada Hargeysa.
Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shilkii xalay uu geystay khasaaro badan, isla markaana tilmaamay in gurmad deg deg ah loo fidiyey dadkii ku dhaawacmay, iyagoona tacsi u diray dadkii ku naf-waayay Shilka.